Ihe 7 banyere Covid-19 na-echegbu ndị isi azụmaahịa kachasị
Isi nri Glassware
Glassware ịchọ mma
Ihe ndozi iko
Ndị jidere kandụl
Ihe ndozi okpokoro nku
London (Azụmahịa CNN) Oge nlaazu ogologo bu ihe kacha echegbu diri ndi isi oru n company ulo oru ha ka ha tugharia uche na oria ojoo site na oria ojoo a. Ma enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eme ka ha mụrụ anya n’abalị.
Ndị na-eme ihe bụ ndị ọrụ ya ịchọpụta ihe egwu dị na-enwekwa obi abụọ maka mmụba metụtara ego, oke ọrụ nke ndị ntorobịa na mmụba nke cyber na-esite na ngbanwe gaa na-arụ ọrụ n'ime obodo, dịka akụkọ sitere na World Economic Forum (WEF), Marsh & McLennan na Zurich Insurance Group.
Ndị ode akwụkwọ nyochara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara dị ize ndụ 350 sitere na nnukwu ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Dabere na akụkọ ahụ, nke ebipụtara na Tuesday, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị zaghachirinụ depụtara nkwụghachi ụgwọ ogologo ụwa dịka "ihe egwu kachasị" chere ụlọ ọrụ ha. Ndị dere akụkọ a kwupụtakwara enweghị ahaghị n ’ọrụ, mmebi nke nkwa ihu igwe na iji teknụzụ na-adịghị mma dị ka ihe egwu na-esite na oria ojoo Covid-19.
Emere nyocha ahụ n’ime izu abụọ mbụ nke Eprel.
Ndị na-eme iwu na ụwa niile na-achọ ugbu a iwepụ akụ na ụba ha site na ndagide na-akpata coronavirus, ịmaliteghachi azụmahịa, ụlọ akwụkwọ na ụgbọ njem, ebe ha na -eme ka ihe egwu nke abụọ nke nwere ike ịmanye mmechi ọhụụ pụta.
International Monetary Fund kwuru n'ọnwa gara aga na ọ na-atụ anya na GDP zuru ụwa ọnụ ga-enweta 3% na 2020, ndakpọ akụ na ụba kemgbe Oké Ndakpọ Akụ nke 1930.
Ndị na - ede akwụkwọ akụkọ WEF kwuru na "mmefu akụ na ụba na-ebelata ihe dị na 19, chọrọ ijeri dollar dollar chọrọ, ọ nwere ike ibute usoro nhazi nke akụ na ụba ụwa na - aga n'ihu, dịka mba dị iche iche na - eme atụmatụ maka mgbake na ịlọ ụwa."
"Mmezi ụgwọ dị ka o nwere ike ịbubata mmefu ego gọọmentị na mmezi ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ ... akụ na ụba ndị na - apụta, nọ n'ihe ize ndụ nke ịdaba n'ọnọdụ ọgba aghara miri emi, ebe azụmahịa nwere ike ịbawanye oke ike, mmepụta na usoro asọmpi," , na-arutu aka banyere nchegbu ndi isi n’ileba anya na ebe ndi oru nchoputa di.
IMF na-atụ anya na ụgwọ gọọmentị na mba ndị mepere emepe ga-abawanye ruo 122 nke GDP afọ a site na 105% na 2019. Ọnọdụ mmebi ike nke isi na nnukwu akụ na ụba bụ nchegbu maka 40% nke ndị ọrụ nyocha, na ndị dere akụkọ ahụ na-atụ aro na mmefu taa. nwere ike ibute ogo ọhụrụ ma ọ bụ ịnwụ ụtụ isi.
Mgbe a jụrụ ha ihe gbasara nchegbu ha maka ụwa, ndị ahụ a nyochara kwuru ọkwa dị elu nke enweghị ọrụ nhazi, ọkachasị n'etiti ndị na-eto eto, na ntiwapụ ọzọ nke Covid-19 ma ọ bụ ọrịa na-efe efe dị iche.
"Ọrịa ọjọọ ahụ ga-enwe mmetụta na-adịte aka, ebe enweghị ọrụ dị ukwuu na-emetụta ntụkwasị obi nke ndị ahịa, ahaghị nhata na ọdịmma, ma na-agbagha arụmọrụ nke sistemu nchedo mmekọrịta," Peter Giger, onye isi ndị ọrụ ihe ize ndụ na Zurich kwuru na nkwupụta.
Ọ gbakwụnyere, "Site na nrụgide dị ukwuu na ọrụ na agụmakwụkwọ - ihe karịrị ijeri ụmụ akwụkwọ ijeri 1.6 na-agụghị akwụkwọ n'oge ọrịa ahụ - anyị na-eche ihe ize ndụ nke ọgbọ ọzọ furu efu ihu. Mkpebi ndị a ga-ekpebi otú ihe egwu ma ọ bụ ohere ndị a ga-esi na-aga,"
Ọ bụ ezie na ịdị n'otu nke ọrịa coronavirus mepụtara na-enye ohere nke "iwulitekwu njikọta nke ọha, nha nha anya nhatanha," dị ka ndị dere akụkọ ahụ si kwuo, enweghị nsogbu nke mmekọrịta na-esite na enweghị ahaghị nhata na enweghị ọrụ bụ ihe egwu na-apụta n'ihu akụ na ụba ụwa.
Ha kwuru na mmụba nke ọrụ dịpụrụ adịpụ maka ndị ọrụ nwere ọkaibe nwere ike ime ka enweghị ọrụ na-akpata enweghị ọrụ na ọnụ ọgụgụ na-arị elu maka ndị nwere ọgụgụ isi agagharị, "ka ha kwuru.
Enwelarị ihe akaebe iji gosipụta na ndị na-akpata obere ego na ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ na-ebute oke akụ na ụba site na njigide mkpọchi.
Akuko a choputara na oganihu na mmezi onodu gburugburu obibi nwere ike igbochi Ọ bụ ezie na omume na echiche ndị ọhụrụ banyere ime njem nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe iji hụ na mgbake carbon dị ala, "ịhapụ atụmatụ nkwado na mgbake ma ọ bụ ịlaghachi na mgbaze ọkụ akụ na ụba ụwa" nwere ihe egwu na-emebi ntụgharị ahụ na ike dị ọcha, ndị edemede ahụ kwuru.
Ha na-adọ aka na ntị na ịdabere na teknụzụ na ngwa ngwa ngwa ngwa ọhụụ, dị ka ịkpọtụrụ kọntaktị, nwere ike "ịma aka mmekọrịta dị n'etiti teknụzụ na ọchịchị," na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide na ọha na nna site na ntụkwasị obi ma ọ bụ na-ezighị ezi.
Oge nzipu ozi: Mee-20-2020
Ihe 7 gbasara Covid-19 na-eche ụgbọ ala na-eche ...
London (CNN Business) Nlaghachi ogologo oge bụ nnukwu nsogbu maka ndị isi ụlọ ọrụ ka ha na-atụgharị uche na mkpochapụ ahụ site na oria ojoo a na-efe efe. Ma enwere ọtụtụ ihe na-echekwa ha ...
Mbupu na iko dị elu na 2019
Iko na iko na-ebupụ nke mba ahụ ruru ijeri US $ 76.5 na 2019. Ọnụ ego dollar ahụ na-egosi uru nke 12.2% maka ndị na-ebubata ngwaahịa na afọ ise…
Akụkọ banyere ụlọ ọrụ iko iko China…
Industrylọ ọrụ nke iko China ji akara aka kwụsie ike n'afọ gara aga na mbọ nke imeziwanye akụkụ nhazi a, dịka Ministri nke Industrylọ Ọrụ na Nkà na ụzụ Ozi (MIIT) si kwuo. N’afọ 2019,…
Oge Ego Ego: Ego mbufeta China na ...
N’abali asaa, Mee (Xinhua) - Mbubata ngwa ahịa ndị China na-atụgharịghachi n’ọnwa Eprel, na-agbakwunye akara na azụmahịa mba ofesi na-ejigide onwe ya n’agha ọzọ…
A ga-eme ihe ngosi Canton 127th na ntanetị ...
Dabere na nzukọ ndị isi ala China State Council na Eprel, 7th, 2020, megide ọnọdụ ọrịa zuru ụwa ọnụ, nzukọ ahụ kpebiri, na ...
Adreesị: 604, Nkeji 1, Nwupụta 2, Junsheng Plaza, No.300, Zhongshan North Road, District Gulou, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
Tẹ ekwentị: + 86-13852472956
Ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ihe anyị kwuru, biko zitere anyị email na anyị ga-aza n’ime awa iri abụọ na anọ.